12 Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 12 Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareen safarka Ruushka, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Malaa'igta, cusub, daaqado dhalaalaya oo midab leh oo midab leh, waa qaar ka mid ah walxaha ku jira 12 kaniisadaha ugu xiisaha badan Yurub. Kaniisad kastaa way dheer tahay, ka weyn, kana soo jiidasho badan kan kale, mid kasta oo ka kooban waxyaabo kale.
Milan waxay soo jiidataa malaayiin dalxiisayaal ah sanad walba. Kaniisadda Milan, Milan Cathedral waa hal calaamad oo kaa yaabin doonta jaleecada hore. Way qaadatay 600 sano si loo dhiso kaniisadda ugu weyn Talyaaniga, xarrago leh, nimco leh, oo cajiib ah marmar casaan khafiif ah.
Dariishadaha dhalada leh, xubno gothic, iyo Madonnina taallada dahabka ah ee kore waa wax yar oo ka mid ah waxyaabaha ku soo jiidan doona. Sidaas, haddii aad runtii jeceshahay inaad ku raaxaysato cathedral -ka Milan ee xiisaha leh, markaa waxaad ku dul socon kartaa saqafka kore. Sidaas, Kaniisadda Milan waa Kaniisadda kaliya ee adduunka, meesha aad ku dul socon karto saqafka kore.
Kaniisadda kaliya ee weli socota tan iyo markaas 1882, Kaniisadda Sagrada Familia ee Gaudi, waa shaqo farshaxan. Kaniisadda Sagrada waa isku dhafka Gothic -da Isbaanishka, Art Nouveau, iyo Catalan Modernism architecture. Naqshadaynta Gaudi waxay ahayd 18 spiers, inuu matalo 12 rasuulladii, Maryan bikrad ah, afarta wacdiyayaal, iyo kan ugu sarreeya Ciise Masiix.
Intaa waxaa dheer, mid kasta oo ka mid ah saddexda waji wuxuu leeyahay bannaanka gebi ahaanba ka duwan: wajiga Dareenka, Sharaf, iyo Wajiga Dhalashada. Sidaas, wax badan oo la arko oo la ogaado, si fiican u qorshee safarkaaga Barcelona, si aan loo seegin kaniisaddan cajiibka ah.
3. Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub: Kaniisadda Kolner, Cologne
La dhisay 7 qarniyo, Cathedral -ka Cologne waa astaan ​​cajiib ah oo ah qaab -dhismeedka Gothic. Waxaa intaa dheer, Cathedral -ka Cologne waa fadhiga Archbishop -ka Cologne iyo kaniisadda guga ugu dheer Yurub oo dhan.
Waxa xiiso leh, calaamaddan cajiibka ah waxay ahaan jirtay barxad deggan oo caws leh xilligii Kacaankii Faransiiska. maanta, ma arki doontid wax alaab ah oo ka mid ah marxaladan taariikhda kaatralka. Gudaha ayaa u qurux badan sida bannaanka oo leh daaqado dhalo wasakh leh iyo khasnado. Kolner Dom ayaa si gaar ah u qurux badan habeenkii iyo nalalka qorrax dhaca.
4. Basilica ee Santa Maria Del Fiore, Florence
Pink, cagaar fudud, iyo wejiga marmar cad, sagxadaha mooska gudaha, Basilica di Santa Maria ee Florence waa kaniisad dib -u -dhis oo cajiib ah. Intaa waxaa dheer, Giorgio Vasari frescos ee Xukunka Dambe ee saqafka ma aha inay seegaan kuwa jecel farshaxanka.
Kaniisadda Florence waxay ka badan tahay astaanta. Xitaa haddii aadan xiisaynayn farshaxanka, kaniisaddan ayaa ku soo jiidan doonta oo kugu hayn doonta saacadaha saacadaha farshaxanka cajiibka ah. Haddii aad u baahan tahay neef hawo nadiif ah, ka dibna u fuulo Brunelleschi Cupola si aad u aragto Florence sixir ah.
5. Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub: Charles Kaniisada, Vienna
Astaanta Vienna, St. Charles Cathedral wuxuu aad ula yaaban yahay wajiga cad iyo daaraha cagaaran ee cagaaran. Naqshadeynta qaabka Baroque, St. Kaniisadda Charles ayaa soo jiidata booqdayaasha tan iyo markii 19th qarnigii. Kaniisadda waxaa loogu talagalay in lagu sharfo awoowe Charles Borromeo, quudiyaha, iyo wasiirka silica ee aafooyinka Yurub ee 16th qarnigii.
Si kastaba ha ahaatee, muuqaalka ugu xiisaha badan ee St.. Charles Basilica waa kan 1250 mitir laba jibbaaran frescos ee copula. Si ka duwan kaniisadaha kale ee Yurub, halkaan waxaad ku qaadan kartaa wiishka panoramic si aad ugu raaxaysato frescos meel u dhow. Sidaas, lagu soo gabagabeeyo, St. Kaniisadda Charles ee Vienna waa inaan la seegin fasaxa fasaxa magaalada ee Yurub.
6. Kaniisadda Le Mans, France
Ka go'an Saint Julian, hoggaamiyaha kiniisaddu ugu horeysay ee Le Mans, Kaniisadda Le Mans, waa isku -dhafan qaab -dhismeed aad u qurux badan oo ah qaabka Gothic -ka Faransiiska iyo nave Romanesque. Mid ka mid ah astaamaha xiisaha leh ee soo jiidan doona dareenkaaga ayaa ah badhida oo ku taageeraya dibedda qaab qurux badan. Sidaa darteed wajiga Le Mans Cathedral waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Yurub.
Waxaa intaa dheer, muraayadda wasakhaysan iyo malaa'igta lagu rinjiyeeyay saqafka katidral -ka ayaa ku daraya Le Mans’ qaab dhismeedka xiisaha leh oo kuu daaya khasnado fara badan si aad u ogaato gudaha kaniisaddan 500-jirka ah.
7. Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub: St. Paul ee Cathedral, London
Waxay ku taallaa cirifka London, laakiin dibedda, Kaniisadda Saint Paul ma aha mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan. Quruxda St.. Kaniisadda Paul ayaa is muujin doonta haddii aad waqti siiso inaad gasho. Markaasuu, waxaad la yaabi doontaa ciyaarta qurxinta cad iyo madow. Waxaa intaa dheer, guryaha cathedral ka badan 300 xusuusta ugu wanaagsan ee Britain, sida Wren laftiisa oo naqshadeeyay katidralkii quruxda badnaa.
Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee St.. Kaniisadda Paul waa madxafka xanta. Haa, haddii aad ka shanqadhiso dhinac ka mid ah galalka, derbiyadu waxay u qaadi doonaan ilaa darafka kale.
In kasta oo si xun loo dhaawacay WWII, Berlin Cathedral waa cathedral cajiib ah oo leh il iyo caws cagaaran xagga hore. Berlin Cathedral waxaa loo dhisay qayb ka mid ah qasriga magaalada Berlin, laakiin naqshadeeye Julius Carl Raschdorff ayaa u beddelay si uu u muujiyo ammaanta iyo weynaanta St.. Paul’s Cathedral ee London. Kaliya gudaha 1993, dib -u -soo -celinta ayaa la dhammaystiray, kadib dhicitaankii darbigii weynaa ee Berlin.
Waxyaabaha ugu xiisaha badan Cathedral -ka Berlin waa frescos, qurxinta dahabka, iyo taalooyin. Intaa waxaa dheer, xubinta Saucer ee leh muusikadeeda jaceylka iyo qalbiga dhalaalaysa waa xubinta jaceylka ee ugu dambeysa uguna weyn Jarmalka waxay mudan tahay in waqti loo huriyo fadhiga iyo liis-gareynta. Sayidka, kor u fuula madal daawashada aragtida magaalada Berlin si aad u dhammaystirto socdaalkaaga mid ka mid ah 12 kaniisadaha ugu xiisaha badan Yurub.
9. Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub: Quduuska Basil’s Cathedral, Moscow
Mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan ee lagu booqdo Ruushka waa kaniisadda Saint Basil ee Moscow. Ma seegi kartid kaniisaddan cajiibka ah waxaadna ka arki doontaa meel kasta oo ka mid ah Fagaaraha Cas iyo wixii ka dambeeya. Markaad u sii dhawaato, kaniisad dhexe oo sagaal kaniisadood oo kale ku wareegsan yihiin.
Muuqaalka ugu xiisaha badan ayaa ah in macbudyadan ay isku xiran yihiin marinno khaas ah. Ivan the Terrible wuxuu ahaa maskaxdii ka dambaysay kaniisadda Saint Basil, iyo domesyada midab -kala -duwan leh waa qarsoodi ilaa maanta. Halka nashqad noocan ah ay soo muuqatay qarnigii 17aad, laakiin doorashada midabada lama yaqaan.
10. Kaniisadda Notre Dame, Paris
Gargoyles-ka ayaa kacay oo daaqadaha muraayada-leh 2 astaamaha ku soo jiidan doona sida malaayiin kale oo soo booqda kaniisadda Notre Dame ee Paris. Qurux badan bannaanka, gudahana ku jecel, khasnadda cathedral -ka ayaa kaa qaadi doonta magaalada ugu jaceylka badan adduunka, waayo, views dusha.
Marwadayadu waxay taagan tahay Ile de la Cite waxayna u heellan tahay Bikradda Barakaysan. Intaa waxaa dheer, kaniisaddu waxay ahayd goob loogu talagalay dhacdooyin waaweyn sida xafladdii Napoleon Bonaparte, iyo garaacista Joan of Arc. Sayidka, indhahaagu waxay u bogi doonaan quruxda qaab -dhismeedka kateralka, dhegahaaguna aad u bogaadiyaan sheekooyinka ammaanta.
11. Kaniisadaha Ugu Xiisaha Badan Yurub: Basilica Saint Mark, Venice
Waa mid ka mid ah basilicas ugu quruxda badan ee Europe, laakiin waa waxyaalo qarsoon oo ku yaal Saint Mark's Basilica, taasoo ka dhigaysa kaniisadda ugu xiisaha badan Yurub. Sida laga soo xigtay halyeeyada, Basilica Saint Mark waxaa loo dhisay in lagu keydiyo waxyaabihii Mark wacdiye, afartii rasuul midkood, kadib markii ganacsato ka soo xaday Masar. Sheekadani waxay ka muuqataa 13 -aad mosaic qarnigii, albaabka bidix ka sarreeya marka aad gashid basilica.
Intaa waxaa dheer, Basilica Saint Mark waxay leedahay hanti aad uga qaalisan dahabka taajka qoyska boqortooyada - Pala dOro. Pala waa beddelkii Byzantian, studded leh in ka badan 2000 dhagaxyo dhagaxyo leh. Si aad u soo gabagabeyn, haddii aad qorsheyneyso inaad booqato hal calaamad oo ku taal Venice, Basilica Saint Mark waa kan, ee xiiso leh, quruxda iyo socotada taariikhda jecel.
Wabiyada oo dhan, iyo buundooyinka, ee halyeeyga Prague Castle, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to 6 qarniyo si loo dhammaystiro cathedralka gothic, si aad u soo jiidasho leh oo caan ah oo caan ku ah Prague. Qaddarka waqtiga ay qaadatay in lagu dhiso Kaniisadda Saint Vitus Cathedral waxay ka muuqataa isku dhafka qaab dhismeedka qaababka.
Kaniisadda Saint Vitus waxay leedahay Renaissance, Gothic, iyo walxaha Baroque: sida cirifka munaaradda koonfureed iyo xubinta weyn ee qaybta waqooyi. Daaqadaha muraayadda-midab leh ayaa ah astaamo la yaab leh oo ka jira kaniisad kasta iyo St.. Daaqadaha Vitus kuma soo dhacaan quruxda kaadirrada kale ee xiisaha leh ee Yurub.
We wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo qorshaynta safar aan la ilaawi karin kuwaas 12 cathedrals soo jiidasho leh ee Europe tareen, Gal dunida ee Save A tareenka.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada " 12 Kaniisadaha ugu xiisaha badan Yurub ”goobtaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)